The Ab Presents Nepal » सी संग रात्रिभोजमा सहभागी हुनेलाई कडा शर्तः ४५ मिनेट अगाडी पुग्नुपर्ने, बसेपछि उठ्न नपाउने !
सी संग रात्रिभोजमा सहभागी हुनेलाई कडा शर्तः ४५ मिनेट अगाडी पुग्नुपर्ने, बसेपछि उठ्न नपाउने !
काठमाडौँ, असोज २४ -: चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङसंग रात्रीभोजमा सहभागी हुने राजनीतिक दलका नेताहरुले कडा अनुशासनमा रहनुपर्ने भएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीले शनिबार साँझ सोल्टी होटलमा आयोजना गरेको रात्रीभोजको व्यवस्थापनको पाटो भने परराष्ट्र मन्त्रालयले सम्हालेको छ ।
भोजका लागि परराष्ट्रले सहभागीलाई निम्तोकार्ड पठाईसकेको छ । भोजमा सहभागी हुने नेपालीलाई ७ वुँदे शर्त राख्दै नियमभित्र वस्नुपर्ने शर्त पनि पहिले नै पठाईसकेको छ ।भोजका लागि निम्ता पाएपनि सहभागी हुने नहुने पनि पहिले नै जानकारी दिनुपर्ने, मोवाइल फोन स्वीच अफ गर्नुपर्ने देखि तस्विर लिन नपाउने सम्मका शर्त परराष्ट्र मन्त्रालयले पठाएको निम्तो कार्डमै नथ्थी गरिएको छ ।
यस्ता छन् सातबुँदे शर्त -: १. पुरुषको हकमा राष्ट्रिय पोशाक वा कालो डार्क सुट, सेतो सर्ट, तुना वाध्ने छालाको कालो जुत्ता र महिलाको हकमा राष्ट्रिय पोशाक सारी वा डार्क सुट अनवार्य रुपमा लगाउनु पर्ने ।२. सिटिङ ब्याङकेट भएको हुनाले निम्ता कार्ड प्राप्त हुनासाथ सहभागी हुने वा नहुने जानकारी शीघ्र गराउनु पर्ने ।३. सुरक्षा जाँचको कारण निम्ता कार्डमा तोकिएको समयभन्दा ४५ मिनेट अगावै भोज स्थल पुग्नुपर्ने ।४. मोवाइल फोन स्वीच अफ गर्नुपर्ने, तस्विर खिच्न नपाइने ।५. प्रमुख अतिथिले खाना ग्रहण गर्न शुरु गरेपछि मात्र आफुले शुरु गर्नुपर्ने ।६. सिटिङ डिनर चलिरहेको वेला उठ्न नपाउने, र प्रमुख अतिथि हल बाहिर निस्केपछि मात्र उठ्न पाउने ।७. पाहुनालाई प्राथमिकता दिनु पर्ने ।